I-Hickory Creek Hideaway Bob & Nina 's - I-Airbnb
I-Hickory Creek Hideaway Bob & Nina 's
Igumbi lakho lokulala e igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle sinombuki zindwendwe onguNina
I-Hickory Creek Hideaway yindawo yokuhlala etofotofo e-Enfield Illinois. Amagumbi ethu anamagumbi aliqela acocekile ibe aza kukwenza uzive usekhaya. Indawo engasemva inembonakalo eyenziwe ngamaplanga ibe ingasetyenziselwa ukutshaya. IHickory Creek Hideaway inebhari yakudala ethandwayo ekuhlaleni (iiyure eziyi-10 kusasa ukuya kutsho ngo-12 kusasa). Indawo yokutyela kaBob noNina yindawo yokutyela ethandwayo yasekuhlaleni enesitayile esihle sokupheka ukutya kwaseMerika. Indawo yokutyela ihamba ngqo esitratweni kwaye iindwendwe zinokuoda okanye zihambe ngeenyawo!
Igumbi ngalinye linezinto ezinokusetyenziswa ezisisiseko nefriji, i-microwave nembiza yekofu. Igumbi ngalinye linegumbi lokuhlambela labucala. Amanye amagumbi aneshawara kunye negumbi elidibeneyo. Kukho indawo yakho yokungena kwindawo yokuhlala. Kukho ikhitshi eliqhelekileyo elinento yonke apho iindwendwe zinokwenza isidlo sakusasa sasimahla okanye wamkelekile ukuba uze neendawo zakho zokutya uze upheke nantoni na oyifunayo.
Indawo yokutyela kaBob noNina yindawo yokutyela ethandwayo yasekuhlaleni enesitayile esihle sokupheka ukutya kwaseMerika. Indawo yokutyela ihamba ngqo esitratweni kwaye iindwendwe zinokuoda okanye zihambe ngeenyawo!
Kukho ipaki entle esitratweni.
IDolan Lake yindawo entle yokunyuka intaba, yokuloba neyokuzingela. Ungaphantsi kwemizuzu eyi-10 xa uqhuba.
I am a am to please person. Always around to give a helping hand.
Iholo inebhodi enayo yonke inkcazelo ngendlela yokuqhakamshelana nam nephasiwedi ye-WiFi. Ndidla ngokuba kufutshane ibe ungaqhakamshelana nam nangona iselfowuni yam.